အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးများရှိ စိုစွတ်သောနေရာများနှင့် ရေကူးကန်များ | Weber Cambodia
အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးများရှိ စိုစွတ်သောနေရာများနှင့် ရေကူးကန်များ
All ရေကူးကန် products All ရေချိုးခန်း products All မီးဖိုခန်း products
Weber.dry top ကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းရှိသော ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ထားသည့် မြေပေါ်မြေအောက်ကန်နှစ်မျိုး လုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သော ဘိလပ်မြေဆန်သောရေလုံသုတ်ဆေး
ပထမဦးစွာ လုပ်ဆောင်မည့်နေရာ၏ မျက်နှာပြင်အနေအထားကို အသစ်ဖြစ်စေ အဟောင်းဖြစ်စေ စစ်ဆေးပေးရပါမည်။ အခြားရေလိုင်း မီးလိုင်းများကိုလဲကောင်းမွန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်။ စစ်ဆေးပြီးပါက မလိုအပ်သောပစ္စည်းများ ဖယ်ရှားခြင်း ထိခိုက်လွယ်သောပစ္စည်းများကို ပလတ်စတစ်စများဖြင့်ဖုံးအုပ်ပေးရမည်။
1. ရေယိုစိမ့်နိုင်သော ရေဝပ်နိုင်သောနေရာများနှင့် အက်ကြောင်းများရှိပါကပြုပြင်ပေးပါ။ အကယ်၍ခေါင်မိုးကြမ်းပြင်၏မျက်နှာပြင်သည် ခွက်နေပါက ရေဆင်းပိုက်များဆီသို့ ရေကောင်းမွန်စွာစီးဆင်းနိုင်စေရန်နှင့်ရေဆိုင်းကောင်းမွန်စေရန်ပြုပြင်ပေးပါ။
2. ရေညှိ ကွန်ကရစ်စ နှင့် သဲများပြောင်စင်သွားသည်အထိ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါ။
3. Weber.dry top ရေလုံသုတ်ဆေးကိုအသုံးပြု၍ ရေလုံဆေးသုတ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ပါ။
4. ပထမအကြိမ် ရေလုံဆေးသုတ်ပေးပြီးပါက weber.fibremesh 100 အားဖြည့်ဖိုင်ဘာဂလက်စ် ဇကာကိုဖြန့်ခင်းကာ ရေလုံဆေး၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွဲကပ်အားကိုတိုးမြှင့်ပေးပါ။
5. ဒလိမ့်တုံးကို အသုံးပြု၍ ဇကာပေါ်တွင်လိမ့်ပေးခြင်းဖြင့် လေခိုမှုမရှိစေဘဲ ဇကာကိုဆေးသားထဲကောင်းမွန်စွာ စွဲကပ်စေပါသည်။
6. ခဏအခြောက်ခံပြီးပါက ရေလုံဆေးကို ဇကာမမြင်ရတော့သည်အထိ သုတ်လိမ်းပေးပါ။
ကြွေပြားကို ရွေးချယ်ပြီးပါက ဆိုက်များတွင်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသော ပြဿနာမှာ လက်ဖြင့်ဖျော်သောသာမန် မဆလာ ပင်ဖြစ်သည်(သဲအနည်းငယ်ရောစပ်ထားသည့်အပြင် ခပ်ထူထူခင်းသည့်အခါ ကွဲထွက်ခြင်း ကွာထွက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။)
ထို့ကြောင့် စျေးကွက်အတွင်းတွင်လေ့လာကြည့်သောအခါ ကြွေပြားကပ်ကော်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Weber မှထုတ်လုပ်သောကြွေပြားကပ်ကော်အမျိုးမျိုးအနက် weber.tai cem (အပြာရောင်အိတ်) ကိုအများ၏ထောက်ခံမှုအရ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဖြန့်ချိသူများ၏ အဆိုအရ weber.tai cem သည် ဂရင်းနိုက်ကြွေပြားများ ၂ပေပတ်လည်ကြွေပြားများအတွက်အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ စျေးနှုန်းသင့်တင့်၍ အရည်အသွေးလဲကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အခြားသောတံဆိပ်များနှင့်ယှဉ်လျှင်ပင် weber.tai cem သည်ပေးရသောငွေကြေးနှင့်ထိုက်တန်သောအရည်အသွေးရှိသော ပစ္စည်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Weber သည် လူအများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့အပေါ်ဂရုစိုက်မှုကို ပြသည့်အနေဖြင့် low VOCs, Green Industry စသောထုတ်ကုန်အရည်အသွေးစံနှုန်းများအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ထိုကြွေပြားကပ်ကော်သည် ကြွေပြားကပ်ခြင်းအတွက် စွဲကပ်အားကောင်းမွန်မှုနှင့် လှပသောကြွေပြားကပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။
Technical datasheet weber.dry seal - Technical datasheet (PDF - ) Download • Send
Certificates weber.color HR - Certificates datasheet (PDF - 1,84 MB) Download • Send